Xirsi Wax Ma Yeelin, Waxna Ma Tarin Beeshiisa, Laakiin Maxamuud Xaashi… !!
Beelaha ku dhaqan Gobollada iyo Degmooyinka Somaliland, waxay tartan iyo dedaal xoog badan ugu jiraan soo saaridda Siyaasiyiin leh Han iyo Hoggaamin, marka ay Aqoonsadaan in Siyaasiyiintii hore ugu Matali jiray Saaxadda Siyaasadda Dalkoodu ay Saaxadda ka Lib-dhayaan Sabab kasta ha ahaatee.
Tusaale ahaan, Beesha Habar Jeclo oo ka mid ah Beelaha ay ka dhasheen Siyaasiyiinta xilligan ugu Caansan Somaliland, ayaa tan iyo Sannadkii 2010-kii oo uu Hoggaaminta Dalka ku guuleystay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo ka mid ah Siyaasiyiinta Hal-doorka ah Soomaali oo dhan, ayaa waxa Saaxadda Siyaasadda ka soo bidhaamay Rag u badan dhalinyaro, kuwaasi oo qaarkood Nolosha Siyaasadda ku soo biiray markii Madaxweyne Axmed-Siilaanyo uu Xukuumaddiisa Xilal uga Magacaabay.
Dadkaa aynu Tilmaannay waxa ka mid ah Xirsi Cali Xaaji Xasan oo Aqoontiisu tahay Farsamo-yaqaan dhanka Tiknoolajiyadda ah.
Xirsi oo noqday Wasiirka Wasaaradda Madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa fursad u helay adeegsiga Awoodo badan, maaddaama oo uu ahaa Gacanta koowaad ee Madaxweynaha, taasina waxay u noqotay fursad uu isku muujin karo, maaddaama oo ay u qarsoonaayeen Han iyo Himilo fog oo ku xidhiidhsan Mustaqbalkiisa, taasina waxay horseedday inuu muddo Dhowr Sannadood ah Caan kaga noqdo Fagaareyaasha Siyaasadda ee Somaliland.
Xirsi, maaddaama oo uu ku cusbaa Saaxadda Siyaasadda iyo Habka Maamul ee Dawladda, ahaana Qofka ugu awoodda badan, wuxuu waydaartay xidhiidhkii uu la lahaa Beesha uu ka soo jeedo ee uu Kursiga loo Magacaabay ku matalayey, waxaanu isku qanciyey inuu xidhiidh la samaysto Beelaha guud ahaan Somaliland, si uu saamayn ugu yeesho, wallow uu dayriyey Beeshiisii.
Haddaaba, Maaddaama oo Ragga kale ee ku cusub Saaxadda Siyaasadda isla-markaana tartanku ka dhexeeyo Xirsi ay ka mid yihiin MAXAMUUD XAASHI CABDI, CALI XASAN MAXAMED (CALI-MAREEXAN) iyo XASAN MAXAMED CALI (GAAFAADHI), waxa iswaydiin mudan Shaqsiga ku habboon ama la odhan karo wuxuu Hoggaanka u qabanayaa Siyaasiyiinta cusub ee Habar Jeclo isla-markaana wuu kasban karaa Kalsoonida Beeshaasi ?
Sidaa darteed, Annaga oo su’aashaa ka duulayna ayaanu Deraasad ka samaynay Aragtida Suuqa taal ee Beeshu ka qabto siyaasiyiintan, ee aynu ku bilowno Aragtida Rayul-caamku ka qabo Xirsi Cali Xaaji Xasan.
XIRSI CALI XAAJI XASAN oo ahaa Wasiirkii ugu awoodda badnaa Xukuumadda intaanu is-casilin, waa siyaasiyiinta ku cusbaa saaxadda, helayna fursaddii ugu fiicnayd ee abid la helo, taaso ay kuu caddeynayso in uu noqdo Wasiirkii Hoggaaminayay Guddigii Wada-hadalladii Masiiriga ahaa ee Somaliland la gashay Dawladda Soomaaliya.
Muxuu Ka Bed-qabaa XIRSI ?
Haddayny eegno arrimaha uu ka bed-qabo, Xirsi Cali Xaaji Xasan marka koobaad maaha nin Qabiil ee waa nin Qarankan wax badan u qabtay, sumcadna ku leh dhamaan Qabaa’ilka Somaliland. Xirsi marna kuma kicin inuu soo kala dhaweysto ama qaybiyo Beeshiisa, waxaanu si siman u fogeeyay Beeshiisa, iyadoo uu ka khashaafay inuu meel hoose istaago.
Muxuu Ku Fashilmay Xirsi ?
Xirsi Cali Xaaji Xasan, wuxuu si xawli ah uu yeeshay damac-siyaasadeed isaga oo aan wax garab ah ka haysan Beeshiisa, maaddaama oo aanu waxba ku darsan Beesha muddadii uu xilka hayay, inuu fogeeyo mooyaane, isagoo bedelkoodana ka dhigtay inuu Beelaha kale u noqdo shakhsiga ay ugu cisaynta iyo buunbuuninta badan yihiin, taaso keentay inuu aamino inuu sameyn ku yeelanayo Somaliland, Wallow Iscasilaaddiisu u qorshaysnayd nooc inqilaab ama qaran dumin ah, isagoo Xirsi seegay in Shacabka Somaliland yahay Beelo wada deggan, Nin kastaana halka ay Beeshiisa ka taagan yahay uu wax ku saameeyo. Ta ka sii daran ee Xirsi fashilisay ayaa noqotay inuu ku biiray Xisbiga WADDANI, Xilli ay Beeshiisu taageero laxaad leh u hayso Xisbiga kulmiye.
2, MAXAMUUD XAASHI CABDI, oo hadda ah Wasiirka Wasaaradda Madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland, wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta ugu waaya-aransan ee muddada dheer ku soo jirey siyaasadda, wuxuu isagoo da’ yar noqday Maayarkii ugu horeeyay ee Magaalada Burco, wxuuu noqay Xildhibaan ka mid ah Golihii Wakiillada ee ugu horeeyay ee Somaliland, sidoo kale wuxuu noqday Wasiirka Wasaaradda Duulista Hawada iyo Gaadiidka Cirka ee Somaliland, waxaanu ahaa Wasiirkii ugu Waxqabadka badnaa intii uu Wasaaradda Duulista joogay.
Maxamuu Xaashi Cabdi, waxaa Nin Shaqo badan, oo is-dhowrid badan, deggan, aadna u yaqaan Dhaqanka iyo Siyaasadda Somaliland.
Arrimaha uu ka bed-qabo Maxamuud Xaashi Cabdi, maaddaama oo uu leeyahay khibrad soddomeeyo Sannadood ah oo uu Saaxadda Siyaasadda Somaliland ku jiray, wuxuu ka bedbaaday inuu ku milmo khilaafkii xisbiga kulmiye, waxaanu haystaa Sumcad uu ku helay shaqadii uu ka qabtay madaarrada dalka.
Maxamuud Xaashi wuxuu xidhiidh dhow la leeyahay Madax-dhaqameedka Beeshiisa iyo Beelaha kale ee Somaliland-ba. Wuxuu aad uga shaqeeyay Wada-hadallada beelaha bariga Somaliland, isagoo kaashanaya dhaqanka iyo aqoonta uu u leeyahay xalinta khilaafaadka Beelaha.
Arrimaha uu ku fashilmay Maxamuud Xaashi ee lagu xanto waxa ka mid ah inuu yahay Nin qabiili ah ilaa xiligii uu ka midka ahaa Baarlamaankii Xukuumaddii ALLE ha u naxariisteen MAXAMED XAAJI IBRAAHIN CIGAAL, waxa kale oo dhawr jeer soo baxay warar sheegaya inuu doonayo inuu damaciisa siyaasadeed ula wareego Xisbiga UCID, isagoo is tusaya inuu ka noqon karo musharrax Madaxweyne isla-markaana uu Beeshiisa cod kaga heli karo.
Waxa kale oo hadda soo ifbaxaya warar xogogaal ah oo sheegaya Qorshaha u yaal Wasiir Maxamuud Xaashi Cabdi oo ah Arrin aanu Weligii ku kicin siyaasi ka soo jeeda Beeshiisu, taasi oo ah inuu kala qaybiyo Beesha uu ka soo jeedo ee MUUSE ABOKOR IYO MAXAMED ABOROR (Habar Jeclo) oo ula muuqatay sida kaliya ee uu ku gaadhi karo hankiisa ah inuu noqdo Guddoomiyaha KULMIYE, Muuse Biixi Debadii. Si uu taas u gaadhana wuxuu sameeyay Talaabooyinkan muujinaya Xaqiiqada iyo Jiritaanka Qorshahan:-
A. Markii ugu horeysay inuu soo abaabulo salaadiin dhaliilaysa hoggaanka kulmiye
B. Soo dhaweyn uu u muujinayo Beesha MUUSE ABOKOR, isagoo u magacaabey Agaasimeyaal guud iyo Agaasimeyaal-waxeedba.
C. Sidoo kale, waxa la ogaa inuu u ololeeyay Guddoomiyaha Dalladda SONYO oo ka mid ah Beesha uu soo dhawaynta u muujinayo.
D. Isaga oo si badheedh ah u faquuqey Beesha MAXAMED ABOKOR, hadday yihiin siyaasiyiin, Cuqaal, Dhalinyaro intab, isaga oo doonaya inuu nacsiiyo Xukuumadda iyo xisbigaba si qorshihiisu u noqdo Midho-dhal.
Haddaba, waxaa is weydiintu tahay Maxamuud Xaashi Cabdi waxaa loo arkayey Nin waayo-arag ah, ee ma Kursiga Wasaaradda Madaxtooyada ee uu ku fadhiyo ayaa waalidan wata.?
Cali Xasan Maxamed (Cali-Mareexaan) oo ah Wasiirka Wasaaradda Hawlaha guud, Gaadiidka iyo Guryeynta Jamhuuriyadda Somaliland, waa Siyaasi da’ yar oo ka mid ah Ragga Saaxadda Siyaasadda Somaliland caanka ah, waxaana lagu tilmaamayaa Xisbiyahan ku adag Mabaa’diida Xisbiga Muxaafidka ah ee KULMIYE.
Dadka yaqaanna Cali-mareexaan waxay sheegaan in Hankiisa Siyaasadeed ee Mustaqbalka uu mar walba ka horeysiiyo Guul ay gaadhaan Xisbiga iyo Xukuumadda uu ka tirsan yahay.
Ugu dambayn, Xasan Maxamed Cali (Gaafaadhi) oo ah Afhayeenka Xisbiga KULMIYE, ayaa ah Siyaasi Qunyar socod ah, oo kaalin Muuqata ku leh Xisbiga KULMIYE.
Dadka yaqaanna Xasan-Gaafaadhi ayaa sheega inuu dedaal ugu jiro sidii uu Xisbiga dhexdiisa iskaga muujin lahaa, si uu mustaqbalka hankiisu ugu Meel-maro.
Previous: Axkaamta Soonka iyo Sh. Barbaraawi..Q3aad
Next: Maxaa u sabab ah hakadka ku yimi Duulimaadyadii Turkish Airlines ee Muqdisho
Warbixin: Siddee ayey warbaahinta Caalamku uga warameen Doorashada Somaliland?